‘बाग्लुङमा आतंकित हुनुपर्ने स्थिति छैन’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ७ गते ७:५१
बाग्लुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिकामा दुईजनामा संक्रमण देखिएपछि अहिले गण्डकी प्रदेशमा काेराेना संक्रमणकाे जाेखिम बढेकाे छ। त्यहाँकाे स्थानीय सरकारले कसरी जाेखिम नियन्त्रणकाे काम गरिरहेकाे छ भन्नेबारेमा हेल्थपाेस्टनेपालले नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पाैडेलसँग कुराकानी गरेकाे छ।
बाग्लुङ नगरपालिकाभित्रकै दुई वडाका दुईजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ?
कोरोना भाइरस संक्रमितहरू बाग्लुङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ निवासी हुनुहुन्छ। वडा नम्बर ३ गौडाकोट बजारबाट नजिकै पर्छ। बाग्लुङ नगरपालिका–३ गौंडाकोटकी ६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेल शनिबार डिस्चार्ज हुनु भएकाे छ। उहाँ त्यहीँकै हुनुहुन्छ। अर्को केस वडा नम्बर ४ मा देखिएको हो। वडा नम्बर १, २, ३ र ४ बजारका मुख्य भाग हुन्। अर्की युवती, जसलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ, उहाँको घर पनि बजारनजिकै पर्छ। बजारको नजिकै भएकोले अलि जोखिम र त्रास थियो। तर, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षणपछि अहिले चिन्ता हटेको छ।
दुई वटा वडामा कति जनसंख्या छ?
वडा नम्बर ३ मा ११ हजार जति मतदाताको सूचीमा रहेको छ। तर, बसोबास १० हजार जतिको रहेको छ। वडा नम्बर ४ मा चाहिँ चारदेखि पाँच हजारसम्मको बसोबास रहेको छ। बजारको इलाका भएकाले बसोबास बाक्लो नै छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि वडा नम्बर ३ र ४ सँगै समग्र बाग्लुङ नगरपालिकामा कसरी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ?
फ्रान्सबाट फर्किएकी युवतीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भयो। ती बहिनीको ट्राभल हिस्ट्री आइसकेपछि हामी पनि सतर्क भयौं। फेरि ६५ वर्षीया महिलालाई पनि कोरोना संक्रमण पत्ता लाग्यो। उहाँ सर्वसाधारणसँग भेट्दै हिँडेको र सामान्य मेडिकलमा पुगेर रूघाखोकी ज्वरो आएर औषधी लिएको भन्ने कुरा आयो। उहाँलाई पोजिटिभ देखिएपछि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूसँगै समाज आतंकित हुने स्थिति सिर्जना भयो। तर, उहाँको परिवारका सदस्यकै स्वाब टेस्ट गरेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। अनि अलिकति मनोबल उठ्यो। परिवारमै सरेको रहेनछ। यो भाइरस त्यतिकै सर्ने रहेनछ भन्ने भयो। उहाँले भेटेका र आफन्तहरूको टेस्ट गर्दा संक्रमण नदेखिएपछि वडाबासी र नगरबासीको मनोबल उठेको छ। र, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधारोन्मुख छ। चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। कोरोना लागेपछि ज्यानै जान्छ भन्ने आतंक थियो, त्यो अब रहेन। उहाँ अहिले सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यति भइसकेपछि हामीले कोरोनाको संक्रमण अरूलाई देखिएको छैन, र चिन्ता लिनुपर्दैन भनेर सन्देश दियौं। र, जनचेतना फैलाउने काम गर्‍यौं। संक्रमित हुँदैमा गम्भीर खतरा हुने र समाज ध्वस्त हुन्छ भन्ने होइन भनेर जानकारी गरायौं। एकाध व्यक्तिमा सर्न सक्छ, त्यसैले सुरक्षित रूपमा बस्न अनुरोध पनि गर्‍यौं। विषादी छर्किने काम पनि गर्‍यौं।
उहाँहरूको घरपरिवारलाई भेट्ने र औषधी उपचारको प्रबन्ध मिलाउने जस्ता कार्यहरू हामी आफैंले गर्‍यौं। संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सञ्चारमाध्यममा जानकारी पनि गरायौं। स्वास्थ्य सन्तुलित भएको थाहा भएपछि धेरै राम्रो सन्देश प्रवाह भयो।
कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ? परिवारका सदस्यसँग तपाईंको भेट भएको छ?
उहाँहरूको घरपरिवारलाई भेट्ने र औषधी उपचारको प्रबन्ध मिलाउने जस्ता कार्यहरू हामी आफैंले गर्‍यौं। संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सञ्चारमाध्यममा जानकारी पनि गरायौं। स्वास्थ्य सन्तुलित भएको थाहा भएपछि धेरै राम्रो सन्देश प्रवाह भयो। कोरोनाको संक्रमणबाट नेपालमा कसैको जीवन समाप्त भएको छैन। त्यसैले, नडराउन हामीले आग्रह गर्‍यौं। फेरि जो संक्रमित हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षित महिला पनि हो। दुवैको आत्मबल पनि बलियो रहेछ। त्यसैले, उहाँहरू अहिले नर्मल अवस्थामा पुग्नु भएको छ। परिवारका सदस्यहरू पहिले जुन चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो, परीक्षणको रिपोर्टमा संक्रमण नदेखिएपछि अहिले परिवारमा संत्रास हटेको छ। तर, सावधानीपूर्वक बस्नुपर्ने हुन्छ। आतंकित हुनुपर्ने स्थिति छैन।
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि के–कस्ता योजना निर्माण गर्नुभएको छ?
नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम कोरोना भाइरसको संक्रमण वा संकेत, जस्तै: ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्या नदेखिएसम्म घरमै रहने भन्ने सचेतना त्यसैसँग जोडियो। अहिलेसम्म विदेशबाट आएका र यहीँ रहनु भएकाहरू पनि अनुशासित ढङ्गले लकडाउनमा बसिरहनुभएको छ। अरूतर्फ कुनै किसिमको प्रारम्भिक संकेत देखियो भने तत्काल राख्न र प्राथमिक उपचार गर्न क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गरिएको छ। रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि शंकास्पद बिरामीहरूलाई राख्नका लागि पनि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको हो। २० बेड क्षमताको सुविधासम्पन्न एउटा होस्टेललाई हामीले क्वारेन्टाइनको रूपमा विस्तार गरेका छौं। नगरपालिकामै अत्यावश्यक सेवाहरूको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ।
साविकको धौलागिरी अस्पताल अहिलेको प्रादेशिक अस्पतालमा चार बेडको आइसोलेसन वार्ड छ। जसमा दुई जना कोरोना संक्रमित बिरामी त्यहीँ उपचाररत् हुनुहुन्छ। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर चारबाट १० बेड बनाउने तयारी हुँदैछ। त्यहाँ जाने आउने प्रबन्ध छुट्टै छ। अरू जनरल सेवाहरू सुचारू छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पिपिईको प्रबन्ध गर्ने, सावधानी अपनाउने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा चेतना र स्वअनुशासन नै पहिलो कुरा हो भन्ने बोध गराउन निरन्तर काम भइरहेको छ।
बाग्लुङमा आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ? सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने सामग्री कसरी उपलब्ध गराइरहनु भएको छ?
अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध भइरहेको छ। तरकारी स्थानीय उत्पादन नै पर्याप्त छ। आपूर्ति व्यवस्थाको सहजीकरणका लागि काम भइरहेको छ। तरकारी बजारमा उपलब्ध गराउन समस्या छैन। स्थानीय उत्पादकहरूले नै बजारमा तरकारी पुर्‍याइरहनु भएको छ। विशेषतः मजदुर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बजार छोडेर गाउँ–गाउँ जानुभएको छ। बजार क्षेत्रमा जनघनत्व अहिले कम भएकाले पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज छ भन्न सकिन्छ। सुन्तला, स्याउ, अनार लगायतका फलफूल बाहिरबाट आउने गरेको छ। अरू अत्यावश्यक सामग्रीहरू होलसेलरहरूमार्फत् आमनागरिकका घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तरकारी, खाद्यान्न, दुग्ध र औषधी पसलहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालित छन्। उपभोक्ता घटेपछि तरकारीको मूल्य घटेको छ। समग्रमा कुनै सामग्रीको अभाव छैन।
लकडाउन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ?
लकडाउनका सन्दर्भमा सचेतना फैलाउने काम गरेका छौं। सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेका छौं। कडाइका साथ लागि गर्न प्रहरी प्रशासन तदारूकताका साथ लागेको छ। लकडाउनमा हिँड्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। एकैदिनमा एक सय २० जनासम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सम्झाएर छोडेको पनि छ। प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर हुन र सामाजिक दूरी कायम राख्दै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन आग्रह गरिरहेको छ।
अहिले मानव जातिकै रक्षाका निम्ति हामी सबै लडिरहेका छौं। लकडाउन र हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदि कार्य नै कोरोना भाइरसको जोखिम हुनै नदिने उपाय हुन्।
कतिपय त दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरू पनि छन्। निम्न आय भएका र अहिले रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई राहत वितरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
बाग्लुङ नगरपालिकाभित्र रहेका २ हजार ४३ घरधुरीलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छौं। दैनिक ज्यालादारी गरिखाने र आर्थिक संकट झेलिरहेका नागरिकलाई राहत दिइएको हो। एक–दुई व्यक्ति भए ५–१० किलो र ठूलो परिवार छ भने २५ किलो चामलसहित दाल, तेल, साबुनसम्म उपलब्ध गरायौं। अर्को चाहिँ नगरपालिकाभित्र खाद्यान्न बैङ्क स्थापना गरेका छौं। त्यसबाट पनि सयौंले लाभ लिइरहनु भएको छ। यहाँ घर पनि नभएका र बाहिरबाट आएका तथा काम बन्द भएपछि ठेकेदारको समेत सहायता नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरेका छौं। एक व्यक्तिलाई १० किलो चामल अन्य सामग्री तथा अलि ठूलो परिवार भएमा १० किलो चालम र ५ किलो आँटा दिइरहेका छौं। धेरै सामाजिक संघ-संस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि पैसा उपलब्ध गराउनु भएको छ। ५० लाख रूपैयाँजतिको राहत कोष स्थापना गर्‍यौं। त्यसमा प्रदेशका तर्फबाट १० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। अरू काम जनस्तरबाटै भइरहेको छ।
बाग्लुङ नगरबासीलाई के अपील गर्न चाहनुहुन्छ?
अहिले मानव जातिकै रक्षाका निम्ति हामी सबै लडिरहेका छौं। लकडाउन र हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदि कार्य नै कोरोना भाइरसको जोखिम हुनै नदिने उपाय हुन्। यो अनुशासन हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। आफू जोगिएर समाज, देश र विश्व जोगाउने प्रण गर्नुपर्छ। यसमा सरकारले घोषणा गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाहरूले बनाएका नियम, मापदण्ड, मूल्य र मान्यताहरूलाई पालना गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, नागरिकको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च पार्नका लागि हामी सबै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँहरूको प्रोत्साहन र सेवाको सम्मानका कार्य अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रो जीवन नै उहाँहरूको हातमा छ। साथै, यो संकटको घडीमा कालोबजारी गरेर, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने कार्य नगर्न अनुरोध गर्नु चाहन्छु। यस्तो संकटको घडीमा मानवीय मूल्य नबिर्सिन आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो प्रवृति देखाउनेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नका लागि हाम्रो पहलकदमी हुनेछ। हातमुख जोड्न समस्या भएका साथीहरूलाई चिन्ता नगर्न आग्रह छ। हामी छौँ। अरू धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ। यो संकटलाई अन्त्य गर्नका लागि सबैले हातेमालो गरौं। सुरक्षित बसौं। र, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीलाई अन्त्य गर्न एकजुट होऔं।